罗马书 15 CCB - Romafo 15 NA-TWI | Biblica América Latina
罗马书 15 CCB - Romafo 15 NA-TWI
1我们坚强的人要扶助软弱的人，分担他们的重担，不该只顾自己的喜好。 2 我们每个人都应该为他人着想，建造他人的生命。 3 因为基督并没有专顾自己，正如圣经上说：“辱骂你之人的辱骂都落在我身上。” 4 从前写在圣经上的话都是为了教导我们，使我们靠着忍耐和圣经的鼓励而有盼望。 5 但愿赐忍耐和鼓励的上帝给你们合一的心去效法基督耶稣的榜样， 6 使你们一起同声颂赞上帝——我们主耶稣基督的父。
7 所以，你们应该像基督接纳你们一样彼此接纳，使上帝得荣耀。 8 你们要知道，基督为了上帝的真理成为犹太人[a]的仆人，好实现上帝对犹太人祖先们的应许， 9 使外族人也因祂的怜悯而将荣耀归给上帝。正如圣经上说：
14 弟兄姊妹，我知道你们充满良善，知识全备，能彼此劝导。 15 但我仍放胆写信提醒你们几件事，因为我蒙上帝赐恩， 16 在外族人中做基督耶稣的仆人和上帝福音的祭司，好叫外族人借着圣灵得以圣洁，可以作上帝喜悦的祭物。 17 因此，我在基督耶稣里以事奉上帝为荣。 18-19 别的事我不敢提，只有一件是我津津乐道的，就是基督借着我的言语行为，用神迹奇事和圣灵的大能叫外族人顺服，使我把基督的福音从耶路撒冷一路传到了以利哩古。 20 我立志只去从未听过基督之名的地方传福音，免得我建造在别人的根基上。 21 正如圣经上说：“对祂毫无所闻的，将要看见；未曾听过的，将要明白。”
22 因此，我一直受到拦阻，不能到你们那里。 23 但如今福音传遍了这一带，况且我几年来一直盼望去你们那里， 24 所以我想去西班牙的途中路过你们那里，稍作停留，享受与你们的相聚之乐，然后由你们资助我上路。 25 但现在我要去耶路撒冷服侍当地的圣徒， 26 因为马其顿和亚该亚的教会欣然捐出了财物给耶路撒冷的穷困圣徒。 27 这固然是他们慷慨解囊，但也可以说是他们该还的债。外族人既然分享了犹太圣徒属灵的福分，现在以物质报答他们也是应该的。 28 等我办完这件事，将捐款交付他们之后，我就会途经你们那里去西班牙。 29 我知道我去的时候，必会把基督丰盛的祝福带给你们。
30 弟兄姊妹，我借着我们主耶稣基督和圣灵所赐的爱心，恳求你们与我一同竭力祷告，为我祈求上帝， 31 使我脱离犹太地区不信之人的迫害，叫耶路撒冷的圣徒乐意接受我带去的捐款， 32 并使我按照上帝的旨意欢然去与你们相聚，一同重新得力。
CCB : 罗马书 15
1Ɛsɛ sɛ yɛn a yɛyɛ den wɔ gyidi mu no tumi boa wɔn a wɔn gyidi sua no na wɔatumi agyina wɔn haw ano. Ɛnsɛ sɛ yɛyɛ biribi de ma yɛn ho. 2 Mmom, ɛsɛ sɛ yɛn mu biara boa ne nua wɔ ne yiyedi mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ ne gyidi den. 3 Efisɛ, Kristo anyɛ amma ne ho. Sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Nsɛm a wɔkae bere a wɔrebɔ wo adapaa no aba me so.” 4 Biribiara a wɔakyerɛw wɔ Kyerɛwsɛm no mu no, wɔakyerɛw de kyerɛkyerɛ yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnam boasetɔ, nkuranhyɛ a Kyerɛwsɛm no de ma yɛn no so benya anidaso.
5 Onyankopɔn a yenya boasetɔ ne nkuranhyɛ fi ne nkyɛn no, mmoa mo mma munni Kristo Yesu nhwɛso no so na moatumi anya saa nsusuw pa no bi, 6 sɛnea ɛbɛyɛ a, mo nyinaa de nne koro bɛkamfo Onyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo Agya no.
7 Momma mo ho nka mo ho mo ho mfa nhyɛ Onyankopɔn anuonyam sɛnea Kristo agye mo no. 8 Efisɛ, meka kyerɛɛ mo se, Kristo Yesu bɛyɛɛ Yudafo somfo de kyerɛe sɛ Onyankopɔn yɛ ɔnokwafo a ɔbɛma ne bɔ a ɔhyɛɛ agyanom no aba mu, 9 na wama Amanamanmufo nso akamfo no wɔ ne mmɔborɔhunu ho, sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Eyi nti, mɛkamfo wo wɔ Amanamanmufo mu na mato dwom akamfo wo din.”
10 Na ɛka bio se, “Mo Amanamanmufo, mo ne me manfo nni ahurisi!”
11 Na bio, “Amanamanmufo nyinaa nyi Awurade ayɛ; aman nyinaa nkamfo no!”
12 Na bio Yesaia ka se, “Yisai aseni bɛsɔre abedi Amanmanmufo so; ɔno na wɔn ani bɛda no so.”
13 Esiane gyidi a mowɔ wɔ ne mu no nti, Onyankopɔn a anidaso fi no no, bɛma mo ani agye na moanya asomdwoe sɛnea ɛbɛyɛ a Honhom Kronkron tumi mu no nti, mo anidaso bɛkɔ so anyin.
14 Me nuanom, m’ankasa mete nka sɛ, ade payɛ ne osuahu a ɛma mutumi kyerɛkyerɛ afoforo no ahyɛ mo ma. 15 Nanso saa krataa yi mu no, masi me bo wɔ nneɛma bi a mabɔ mo ho kɔkɔ wɔ ho pɛn no ho. Esiane adom bi a Onyankopɔn de adom me no nti na ama me bo ayɛ duru, 16 sɛ meyɛ Kristo Yesu somfo a ɛsɛ sɛ meyɛ adwuma ma Amanamanmufo no. Mesom sɛ ɔsɔfo, ka Onyankopɔn Asɛmpa no sɛnea ɛbɛyɛ a Amanamanmufo bɛyɛ afɔrebɔde a ɛsɔ Onyankopɔn ani a Honhom Kronkron no de ama no. 17 Me ne Kristo ayɛ baako yi, afei, mitumi hoahoa me ho wɔ Onyankopɔn som mu. 18 Mesi me bo aka nea Kristo nam me so de nsɛm ne nneyɛe ama madi Amanamanmufo anim, 19 nam nsɛnkyerɛnne tumi ne Honhom no tumi so ama wɔatie Onyankopɔn nkutoo. Enti m’akwantu a mitu mifii Yerusalem baa Iliriko no ama maka asɛmpa a ɛfa Kristo ho no nyinaa.
20 Na me botae ne sɛ, daa mɛka asɛmpa no wɔ mmeaemmeae a wɔntee Kristo ho asɛm da no, sɛnea ɛbɛyɛ a merento me fapem wɔ obi de so, 21 sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Wɔn a wɔnkaa ne ho asɛm nkyerɛɛ wɔn no behu, na wɔn a wɔntee no nso bɛte ase.”
Paulo yɛ n’adwene sɛ ɔbɛkɔ Roma
22 Esiane saa asɛm yi nti, nneɛma pii siw me kwan a ɛmma memma mo nkyɛn. 23 Nanso mprempren a mawie m’adwuma wɔ saa amantam yi mu no, na afei mfe pii ni a meperee sɛ mɛba abehu mo no, 24 mepɛ sɛ meba mprempren ara. Sɛ merekɔ Spania a, mɛpɛ sɛ mehu mo na moaboa me ama makɔ hɔ bere a me ne mo atena anigye so kakraa bi no.
25 Mprempren ara, merekɔ Yerusalem makɔsom Onyankopɔn manfo a wɔwɔ hɔ no.
26 Efisɛ, asafo a ɛwɔ Makedonia ne Akaia no asi wɔn adwene pi sɛ wɔbɛboa ahiafo a wɔfra Onyankopɔn manfo a wɔwɔ Yerusalem no mu. 27 Wɔn ara na wosii wɔn adwene pi saa, nanso, nokwarem, ɛyɛ wɔn asɛde sɛ wɔboa saa ahiafo no. Amanamanmufo no nyaa Yudafo Honhom no mu nhyira no bi. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ Amanamanmufo no de wɔn ahode som Yudafo no. 28 Sɛ miwie saa dwumadi yi na mekɔ wɔn nkyɛn na mede sika a wɔapɛ no nyinaa ma wɔn a, mefi hɔ makɔ Spania. Na sɛ merekɔ a, medu mo hɔ mabɛsra mo. 29 Sɛ meba mo nkyɛn a, minim sɛ mede Kristo nhyira a ɛboro so no bɛba.
30 Anuanom, menam yɛn Awurade Yesu Kristo ne ɔdɔ a Honhom no de ma me no so hyɛ mo sɛ, mo ne me mmɔ mu mmɔ Onyankopɔn mpae dennen mma me. 31 Mommɔ mpae sɛnea ɛbɛyɛ a asɛm bi rento me wɔ wɔn a wonnye Onyankopɔn nsɛm no nni no mu wɔ Yudea, na mesom a mesom wɔ Yerusalem no, Onyankopɔn manfo a wɔwɔ hɔ no agye atom. 32 Sɛ ɛyɛ Onyankopɔn pɛ a, mede ahosɛpɛw bɛba mo nkyɛn mabɛsra mo.
33 Asomdwoe Nyankopɔn no ne mo nyinaa ntena. Amen.
NA-TWI : Romafo 15